Soloky mihamahazo laka | Hevitra MPANOHARIANA
Tonga ny filoha
Androany hariva tamin'ny 5 ora sy sasany no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny filoha Ravalomanana.
Tahatahaka ny masiaka ihany ny teniny miteny hoe raha toa tsy mahafaly na tsy mampety ny masoivoho sasany ny lalàna misy eto amin'ny firenena dia mahazo mangoron'entana mody ihany koa izy.
Tatitra nataon'ny mpanao gazetin'ny mbs radio moa io fa dia ho hitan'ny be syny maro ny fomba nitenenany izany!
Nampidirin'i jentilisa @ 17:25, 2007-05-18 [Valio]
tonga ny filoha.
Hay izay ny teniny ry jentilisa !
Vao aninenkeo koa izahay no nampitaina vaovao fa nolavin'ny fanjakana malagasy koa ny fanendrena ny "consul honoraire" italiana any amintsika. Italie manko dia any Pretoria no masoivoho misahana an'i Madagasikara, ka ireo teratany italiana eo amin'ny 2000 monina ao Madagasikara dia mba niady mafy nanomboka tamin'ny taona 2000 ny hisokafan'ny masoivohon-drizareo any, ary tamin'ny volana janoary teo dia nanaiky ny filatsahan'andriamatoa Ruffin Kaimane ho consul any ny fitondram-panjakana.
Kanefa tamin'ny volana avrily teo dia nanoratra ho an'ny Fikambanan'ny Italiana monina ao Madagascar izy fa "noho ny antony tsy fantany akory dia nofoanan'ny (annuler) fitondrana malagasy izany fanendrena azy izany". Ka asa re, tsy hay raha ambara !
Nampidirin'i ikalamako @ 18:40, 2007-05-18 [Valio]
ny Soisa ihany koa
Araka ny gazety iray novakiako androany sabotsy dia "tsy nanaiky nihaona" tamin'ny solotenam-panjakana Soisa ihany koa ny lehilahy nefa voalaza fa ny filoha hoe no nangataka fihaonana!
Misy ahitsy kosa angaha ny soratro fa ny izy dia hoe raha misy miteny hoe te-hanontany na hoe malahelo momba ny raharaha politika an'ny Malagasy. rehefa tsy mahay mipetraka izy dia mahazo mangorona entana ihany koa!!!
Nampidirin'i jentilisa @ 09:10, 2007-05-19 [Valio]
Teratany soisa maty nisy nitifitra
Sao dia tsy te hifanazava ny momba ity izy>> Gazety Taratra - Alarobia 16 May 2007
Nampidirin'i tomavana @ 10:57, 2007-05-19 [Valio]
Olana lalina mety idiran'ny politika any ambadika any io vonoan'olona io. Efa misy mahafantatra manko ny fanaon'ny Soisa indrindra fa raha nahafantatra ny fihavian'ilay vahiny ny namono.
Momba ny raharaha Walter Arnold kosa indray dia nifanenjana tamin'ny tsy fitoviam-pijery ny roa tonta dia ny malagasy sy ny soisa. Ny malagasy niahiahy voalohany indrindra ilay mpiray tanindrazana tamin'ilay novonoina sady mpiara-miasa taminy rahateo. Tsy nety nanaiky izany ny fitondrana Soisa fa heveriny ho jiolahy malagasy no namono. Samy nidrikina ny roa tonta tamin'izay fotoana izay.
Nampidirin'i jentilisa @ 11:17, 2007-05-19 [Valio]
Ny aty Soisa ny fanadihadiana sy ny porofo no mialoha ny fiampangana, fa tsy miampanga aloha dia avy eo mitady porofo :(
Amin'ny maha-PMA [firenena isan'ny mahantra] an'i Madagasikara dia tokony tafiditra ao anatin'ireo firenena mahazo laharam-pahamehana amin'ny fanampiana Soisa isika saingy nihena antsasany izany nohon'ny tsirambin'iny raharaha iny
« Madagascar a perdu son statut de pays prioritaire, le budget a été réduit de moitié et la société civile retenue comme partenaire exclusif », Département fédéral des affaires étrangères suisse [eda.admin.ch >>].
Nampidirin'i tomavana @ 11:40, 2007-05-19 [Valio]
mopera vaky damozana
io ary ilay mopera vaky damozana, samy miala.
milaza fa tsy tia vazaha nefa mbola milantolanto mitady vola avy amim-bazaha.
aiza izy izany ragôva à?
Nampidirin'i ANJELY @ 19:18, 2007-05-21 [Valio]